Kudya kwaShe Kwemanheru Musi waNisani 14 | Upenyu hwaJesu
MATEU 26:21-29 MAKO 14:18-25 RUKA 22:19-23 JOHANI 13:18-30
JUDHASI ANOBUDISWA PACHENA KUTI MUTENGESI
JESU ANOTANGA CHIRANGARIDZO
Manheru ano, Jesu adzidzisa vaapostora vake chidzidzo chekuzvinipisa paageza tsoka dzavo. Zvichida vapedza kudya Paseka, anobva ataura mashoko aDhavhidhi ouprofita okuti: “Munhu wandaiva norugare naye, wandaivimba naye, Aidya chingwa changu, andisimudzira chitsitsinho chake.” Anobva atsanangura kuti: “Mumwe wenyu achanditengesa.”—Pisarema 41:9; Johani 13:18, 21.
Vaapostora vanotarisana, mumwe nemumwe obvunza kuti: “Ishe, ndini here?” Kunyange Judhasi Iskariyoti anotobvunzawo. Petro anoita kuti Johani, uyo akagara parutivi paJesu patafura, abvunze kuti ndiani ari kurehwa. Saka Johani anotendeukira kuna Jesu obvunza kuti: “Ishe, ndiani?”—Mateu 26:22; Johani 13:25.
Jesu anopindura kuti: “Ndouyo wandichapa chimedu chandinoseva.” Anotora chingwa oseva mune imwe ndiro iri patafura opa Judhasi obva ati: “Mwanakomana womunhu ari kuenda, sokunyorwa kwazvakaitwa pamusoro pake, asi ane nhamo munhu iyeye anotengesa Mwanakomana womunhu! Zvaizova zvakamunakira kwazvo kudai munhu iyeye akanga asina kuberekwa.” (Johani 13:26; Mateu 26:24) Judhasi anobva apindwa naSatani. Murume uyu, uyo anga atova nepfungwa dzakaipa, anoita zvinhu zvinoenderana nekuda kwaDhiyabhorosi obva ava “mwanakomana wokuparadzwa.”—Johani 6:64, 70; 12:4; 17:12.
Jesu anoudza Judhasi kuti: “Kurumidza kwazvo kuita zvauri kuita.” Vamwe vaapostora vanofunga kuti Judhasi, uyo anogara nebhokisi remari, ari kuudzwa kuti atenge ‘zvinhu zviri kudiwa zvemutambo kana kuti anofanira kupa varombo zvimwe zvinhu.’ (Johani 13:27-30) Asi Judhasi anobuda achienda kunotengesa Jesu.
Usiku ihwohwu hwePaseka, Jesu anotanga chimwe chiitiko chitsva. Anotora chingwa, onyengetera, ochimedura, obva apa vaapostora kuti vadye. Anoti: “Ichi chinomirira muviri wangu uchapiwa nokuda kwenyu. Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.” (Ruka 22:19) Vaapostora vose vanotambidzana chingwa chacho uye vanochidya.
Jesu anobva atora kapu yewaini, onyengetera, obva apa vaapostora. Mumwe nemumwe wavo anonwa waini iri mukapu iyi yavatambidzwa naJesu, uyo ati nezvayo: “Kapu iyi inomirira sungano itsva muropa rangu, ramuchadururirwa.”—Ruka 22:20.
Saka Jesu atotanga chirangaridzo cherufu rwake chichazocherechedzwa gore rimwe nerimwe musi waNisani 14 nevateveri vake. Chichavayeuchidza zvakaitwa naJesu naBaba vake kuti vanhu vanotenda vasunungurwe muchivi nerufu. Kusunungurwa kwacho kuchaitwa vanhu vose vanotenda ndekwechokwadi uye kunopfuura kuya kwakaitwa vaJudha, kwavanoyeuchidzwa nePaseka.
Jesu anoti ropa rake “richadururirwa vazhinji nokuda kwokukanganwirwa zvivi.” Vaapostora vake vakatendeka nevamwe vakafanana navo vachava pakati pevakawanda vachakanganwirwa zvivi zvavo. Ndivo vachava naye muUmambo hwaBaba vake.—Mateu 26:28, 29.
Jesu anotaura uprofita hupi hwemuBhaibheri nezvemunhu waaivimba naye, uye anohutsanangura sei?
Jesu anoudza Judhasi kuti aite sei, asi vamwe vaapostora vanofunga kuti Jesu ari kurevei?
Chiitiko chipi chitsva chinotangwa naJesu, uye chinobatsira chii?
VaKristu vanorayirwa kuti vayeuke zuva rokufa kwaKristu. Zuva racho rinofanira kuyeukwa riini uye sei?